Global Voices teny Malagasy » “Maro an’isa ny tanora. Miaina vanim-potoana vaovao isika, ary fotoananay izao.” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jona 2018 4:41 GMT 1	 · Mpanoratra Enrique Franco Nandika Naomy
Iangavian'ny Tetikasa Reframed Stories  ny olona hamaly ireo lohahevitra sy olana mahazo vahana amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonin-dry zareo. Ireny tantara ireny dia taratry ny eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena any amin'ny fampitam-baovao. Najoro tamin'ny fampiasàna ny sehatra Media Cloud  ny zavon-teny, fitaovam-pandalinana lahatahiry io hanadihadiana ireo amboaran-tsehatra famoahambaovao mandritra ny vanim-potoana iray voafaritra, ahafahan'ireo mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra momba ireo tsikaritra savaranonando hijerena izay mety itazanana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mailo ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa ho solon'izany, io no toerana iaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolan-dry zareo ny itazanana an-dry zareo ao amin'ny famoaham-baovao amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Enrique Franco dia mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas  (Foiben'ny tanoran'i Esmeraldas), fifandaminana iray mandala ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadaoro izay miasa miaraka amin'ny kilonga, tanora, ary ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ny asany voalohany ny fandaharana mandeha isan-kerinandro ao amin'ny radio antsoina hoe La Calle Habla  (Tafatafa an-dalambe), toerana iray ifanakalozan-kevitra sy iadiana hevitra amin'ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo. Ny manaraka etoana dia dika an-tsoratra amin'ny fandraisam-peon'ny fanadihadian'i Enrique’ amin'ny zavon-tenin'ny “joven” (tanora).
Voambolana nibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra 8.811 nivoaka tanelaneran'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 hita niaraka tamin'ny fanononana ny “joven” (tanora) tao amin'ny angona Media Cloud miisa efatra avy amin'ny sehatra famoaham-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (Jereo lehibe kokoa ny sary )
Ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa ry zareo tao Esmeraldas tamin'ny 4 mey 2018 izay nampiray toerana ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny fomba itazanana an-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fitazanana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/07/120416/
 Jereo lehibe kokoa ny sary: https://rising.globalvoices.org/files/2018/05/jovennube.png